Uma ufuna ukuya eholidini ukuze Turkey futhi ufuna ukuhlala elihle aphambili ehhotela elihlangabezana ezindinganisweni eziphakeme izinga, kuyoba inketho kakhulu Imperial De luxe, azinze edolobhaneni Beldibi, esisogwini indawo yesifunda izivakashi Kemer. Sinikeza imininingwane eyengeziwe ukuze uthole ukuthi ziyini lokhu impahla, kanye nokuqonda ukuthi yini imisebenzi yokuzilibazisa ayatholakala izivakashi. Sabuza amazwana abantu abaye bavakashela leli hhotela.
Uphi eziyinkimbinkimbi ihhotela
Imperial De luxe 5 * itholakala ezingwini unspoilt iMedithera, okuyinto waklonyeliswa abe nobungane kwayo zokuhlonipha Blue Flag. Itholakala edolobhaneni Beldibi Kemer izivakashi esifundeni kufakwe sifundazwe Turkish of Antalya. Esikhumulweni sezindiza esiseduzane itholakala emihlanu nje amakhilomitha ukusuka lapho eziyinkimbinkimbi ehhotela. Kuyinto elula kakhulu, ngoba ngemva kokufika endleleni emoyeni imbobo ehhotela kuzothatha imizuzu akukho kuka 40-50 wena. Leli qiniso ngempela bayakwazisa zabantu abahamba nezingane ezincane. Ngenxa yokuthi i-Imperial De luxe itholakala edolobheni elincane zokungcebeleka kude enkabeni Kemer, amakhilomitha angu-12, bheka ngeke baphazanyiswe cishe non-stop umsindo, ejwayelekile iningi imizi izivakashi Turkey nakwamanye amazwe. Ngesikhathi esifanayo, ungakwazi ukuthatha itekisi noma ibhasi zendawo ukuze uthole izindawo edlidlizelayo ngongqimba imigoqo, zokudla, izitolo, izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo, kuma-nightclub disco. Njengoba ulwandle-ke, kusukela ehhotela isendaweni Umugqa wokuqala ukuya ebhishi, kufanele amboze ibanga ezimbalwa kuphela amashumi amamitha.
Kemer, Imperial De luxe: Incazelo
Leli hhotela lokuqala yakhoselisa izivakashi ngo-1998. Kusukela ngaleso sikhathi uye eyenziwa nokubuyiselwa emikhulu eminingana, owokugcina elafika ngo-2010. Ngakho, namuhla, leli hhotela zesimanje kakhulu, ukhululekile futhi has konke okudingayo ukuze omkhulu ukuzijabulisa izivakashi. Territory "Imperial De luxe" Awukwazi uyakuthiwa mkhulu. Ngakho, indawo square metres namakhulu ayisishiyagalombili kuphela. Nokho, endaweni limnandi kakhulu, oluhlaza futhi ihlanzekile. Sekukonke ihhotela has 137 amakamelo ukhululekile, ezinye zazo ziyizilimi zokuhlala nezindawo zokuhlala kubantu abakhubazekile. Sekukonke, Imperial De luxe (Kemer) - nendawo enkulu ngemindeni nezingane, kanye honeymooners kanye nezinkampani ezincane.
Imigomo ehhotela yokuhlala
Ngokusho imithetho bamukeleke eziyinkimbinkimbi ehhotela "Imperial De luxe" (Beldibi, Kemer), ukukhokhela abafikayo lezihambi emagumbini azo iqala emahoreni amabili ngemva kosuku. Uma ufika ngaphambi kwesikhathi ekhethiwe, futhi igumbi yakho isilungile, wena kuzogcwalisa ngokushesha. Uma ufika phambi 14:00 kodwa egumbini lakho ayikahlanganiswa wakhulula izivakashi langaphambilini, noma it is bayilungisele iqembu labasebenzi, uzocelwa ukuba ashiye izinto egumbini imithwalo kanye ukuya adle, ukungcebeleka ngokusebenzisa le ndawo noma thatha cwilisa in the pool noma ulwandle . Ngosuku kokuhamba kumelwe siphume kulelo hhotela ngaphambi emini. Lapho ukulethwa izihluthulelo egumbini kufanele kwenziwe futhi kukhokhelwe egumbini (uma ungazange kukhokhelwe izindleko ukubeka ejensi zabo travel) kanye nokusetshenziswa nezinsizakalo ezengeziwe (Yiqiniso, uma yakhetha lezo). Ungakwazi ukukhokha imali noma ikhadi plastic izinhlelo, "Visa" futhi "MasterCard". Mayelana nokwenzeka amakhadi okukhokha ezinye izinhlelo zokukhokha kufanele azi kusengaphambili ngokushaywa ekuphathweni Imperial De luxe.
Ngoba leli hhotela umndeni, lapha avunyelwe ukuhlala abahambi nezingane zabo bonke ubudala. Kulokhu, kungenzeka ukuba uzibeke endaweni iziponji ngaphezulu noma. Mayelana isidingo le sevisi kusengaphambili kufanele ubaxwayise nokuphathwa eziyinkimbinkimbi ehhotela.
Ngokuqondene indawo yokuhlala ehhotela ezifuywayo ke ngeshwa izivakashi abakhetha ukuya eholidini ku nabangane bakho abane-ezinemilenze, indawo yokugcina ku "Imperial De luxe" akuvunyelwe.
Njengoba sekushiwo, Imperial De luxe ehhotela 5 * inikeza yokuhlala e kwelinye lamakamelo ukhululekile futhi Tastefully kwanikeza 137. Ngokuvamile, ihhotela yakhelwe indawo ngesikhathi esisodwa izivakashi 288. Sinikeza enemininingwane ukuhlala imikhakha efulethini.
Imperial De luxe 5 Igumbi * standard anesitayela amakamelo kwanikeza nge ifenisha entsha. ihhotela has 127 plus ekamelweni elilodwa kubantu abakhubazekile. Igumbi elisezingeni elejwayelekile noma nge ezimbili olulodwa noma omunye umbhede double. Kukhona kungenzeka olulodwa noma umntwana uhlaka owengeziwe. Igumbi ngalinye standard has a emphemeni ayimfihlo ukubukwa akhipha amanzi evulekile kolwandle, ichibi noma entabeni kanye engadini ukubukwa, satellite TV, ucingo, minibar, air conditioning, ukusebenza kokubili ukupholisa futhi bafudumale, lokugezela elineshawa futhi umshini wokomisa izinwele, ephephile, ukusetshenziswa okuyinto khulula.
Ihhotela Imperial De luxe (Turkey) has ezine zalezi amakamelo endaweni square metres nje engaphezu kwamashumi amathathu ngamunye. Bahlanganisa amakamelo amabili, ahlukaniswe umnyango noma udonga. Ziklanyelwe ukuba ihlanganise izivakashi ezimbili noma ezine. Igumbi ngalinye has a lokulala double, yokugezela nomunye lokulala embhedeni kabili noma imibhede abangamawele. Kulesi igumbi kukhona TV, mini-bar, ephephile, air conditioning, ngocingo. Nokho, in the amafulethi eduze Awekho balcony namawindi ebhekene emgwaqweni.
Ihhotela Imperial De luxe has amakamelo ezine kulesi sigaba. Ngamunye wabo siqukethe amakamelo amabili ngezintambo ezinqamula udonga kanye umnyango. Omunye wabo kuyinto lokulala embhedeni kabili, kanti eyesibili - a egumbini lokuphumula. Bobabili amakamelo zigqama kakhulu ehlotshisiwe futhi Tastefully kwanikeza. Ikamelo has zangasese ezimbili Jacuzzi, hairdryer, bathrobes futhi Slippers, kanye mini-bar, emaphakathi air conditioning, flat screen TV, ucingo, itiye isethi, ephephile. Le ndlu has kuvulandi nge ukubukwa ulwandle omangalisayo.
Ihhotela "Imperial De luxe" (Kemer, Turkey), kukhona ezimbili amakamelo kwalesi sigaba. Abaziqhayisa nempahla omangalisayo kuyilungisa zikanokusho. Kukhona amakamelo amabili - igumbi lokulala kanye ephilayo, lapho kukhona embhedeni enkulu double, a usofa ukhululekile, satellite TV, air-conditioning, ezisebenza kumodi ukupholisa futhi bafudumale, ephephile, ngocingo, itiye nekhofi. I Suites zitholakala ezimbili nje zangasese kanye Jacuzzi, eshaweni, hairdryer, bathrobes futhi Slippers. Ikamelo futhi abe kuvulandi nge ukubukwa omangalisayo kahle noLwandle LwaseMedithera.
Pasha Suite - egumbini umhlabeleli at Imperial De luxe 5 *. He sungula a yinkimbinkimbi okukhulu zikanokusho ngempela futhi, kanye endaweni yayo kuyinto square metres 100. Siqukethe lokulala, igumbi ophilayo futhi zokugeza ezimbili. Lolu hlobo lwe-Igumbi has a embhedeni omkhulu kabili, edeskini, yokuqhubela imihlangano nezingqungquthela nezihlalo endaweni, i aquarium nenhlanzi amahle izitshalo, satellite TV, ucingo, mini-bar, air-conditioning (ebusika-ihlobo), ephephile, imifekethiso iphansi, itiye nekhofi amasethi. Amabili en suite zangasese Uyi Jacuzzi, eshaweni, okugeza, hairdryer, bathrobes futhi Slippers. Lokhu lwekamelo ifakwe emphemeni belibona kolwandle.
Zonke izinhlobo ikamelo, etholakala ehhotela aphambili, ezifana yokuhlanza kanye amashidi futhi okugeza amathawula ziyenzeka nsukuzonke. Ngokuphathelene esikhundleni lolwandle amathawula, le nqubo wenziwa ngosuku. Futhi, izintombi zasemizini ehhotela restock njalo zokugeza kuzo zonke izindlu zokugezela. Ngaphezu kwalokho, ungahlala oda ikamelo inkonzo ngokubiza reception.
Ukudla ngendlela ezinhlanu star hotel eziyinkimbinkimbi Imperial De luxe ihlelwe ngokuvumelana "ultra-ol okufakayo". Lokhu kusho ukuthi ihhotela izivakashi ukuzitika iziphuzo usuku lonke esithambile futhi oludakayo zokukhiqiza wendawo, kanye ezinye iziphuzo angaphandle kanye ijusi fresh. Ukuze uthole imali, uzonikezwa iwayini amahle, cognacs, iziphuzo premium nogwayi.
Yokudlela main kathathu ngosuku, wakhonza lezitsha isitayela, ehlanganisa izitsha ahlukahlukene nangekhono uzilungiselele, appetizers, nama-dessert, kokubili cuisine zikazwelonke nezamazwe ngamazwe. Lapha ungakwazi zithokozise ngezithelo fresh. Emini, izivakashi ungaba isidlo ibha isidlo futhi ujabulele okumnandi ice cream. Ngaphandle nje kokuthi izincwadi main lezitsha yokudlela, ihhotela has zokudlela emithathu abasebenza "a la Carte". Lapha ungakwazi oda imenyu okumnandi izitsha Italian, nenhlanzi izitsha kanye sushi.
Isakhiwo ehhotela itholakala Amabha eziningana endaweni yokwamukela izivakashi (usuku lonke), ichibi (ukuvula kusuka 10 ekuseni kuya ku-6 ntambama), at pier (10:00 kuya 18:00), ibha disco (kusuka 11 ekuseni kusihlwa kuze lesithathu ekuseni), ice ibha (kusukela emini kuze kushaye ihora lesithupha ntambama emihlanu). Ihhotela Ubuye ibha isidlo lapho ungaba isidlo emini pizza, sandwich, fries nezinye Ungadla. Ngaphezu kwalokhu, kuba iwayini endlini hookah ku eziyinkimbinkimbi ehhotela.
Ihhotela Imperial De luxe 5 * inikeza eziningi zokuzijabulisa yonke ukunambitheka. Ngakho, ukunakekelwa okukhethekile ofanelwe ukwenziwa Kwezithombe Ezinyakazayo. It ihlukaniswe yaba usuku (bocce, amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela, football mini, kyokushin nomoya sokuzingela, table tennis, amakilasi ku esisuka, isinyathelo Ukuvivinya umzimba ngendlela, kanye imincintiswano ehlukahlukene kanye tournaments) nakusihlwa (imibukiso, umculo bukhoma, ema-disco indaba ephathwayo nobusuku obungamashumi nokunye. d.). Kukhona uhlelo olukhethekile ukuzijabulisa izivakashi abancane kunabo bonke, kuhlanganise izingane club, disco mini, imincintiswano, njll Futhi, for imali eyengeziwe ungasebenzisa isevisi nokugada ...
Ihhotela has okubhukuda ezintathu: i ongaphandle, zasendlini kanye nezingane. Eduze kwabo kuyinto ivulekile ilanga ithala ilanga loungers kanye baphathe nezambulela.
Ungavakashela isikhungo imfanelo, okugeza Turkish (hamam), sauna, ubuhle salon, igumbi massage.
Ihhotela "Imperial De luxe" has isihlabathi ayo kanye itshana ebhishi nge pier. Kukhona inala ukhululekile ilanga loungers kanye baphathe nezambulela. Ngesikhathi sebehlezi ogwini ungakwazi ukugibela banana isikebhe, Ukushushuluza amanzi, Awe-Parasailing futhi uthathe izifundo surfing noma diving.
Imperial De luxe: Izibuyekezo
Njengoba for izihambi eziningi kubalulekile ukwazi ukuthi okuvelayo kwesokunxele ehhotela elithile e abantu baye lapha, thina Yenza amazwana ezakhamizi zethu nabo abaye bachitha amaholidi ehlobo kule "Imperial De luxe" (Beldibi, Kemer).
Okokuqala, izivakashi banake emagumbini abo. Ngakho, ngokuvumelana bakithi, kuthiwa futhi ngempela esasisanda kuyilungisa, ethokomele futhi banikwa izinga ifenisha. Nokho, abanye abahambi abakhathazwa amaqiniso efana umnyango angafihlwa yokugezela, umsindo kakhulu Ekupholiseni imisebenzi ngaphandle nekhono lokusingatha ke, nokunye .. Kule ndaba, babeyovuswa yaklonyeliswa Imperial De luxe ehhotela 4 izinkanyezi, kodwa hhayi 5.
Kepha ukudla, kwaba ngesikhathi ibambene nekhwalithi isiyonke izitsha. Nokho, ezinye izimenywa waphawula ukuthi kukhethwa izitsha ehhotela five star lwalungaba kancane ezihlukahlukene. Futhi ingxenye izivakashi waba namahloni ngenxa yokungabi bikho isobho kwasemini.
abahambi Abaningi bayokwazisa izithombe ku "Imperial De luxe". Ngokusho kwabo, le Animators sisebenza onembeza isicelo eziningi umzamo ukuba singavumeli izivakashi ngizithola. Futhi, endaweni engamamitha izithombe futhi ibalwa izingane.
Kepha kweziziba, akukho izikhalazo ezithile ubengaveli izivakashi. Injabulo enkulu of the izivakashi Ushiye Yiqiniso, ebhishi. Iningi lezihambi ziyaneliswa kakhulu nge endaweni ehlanzekile ulwandle afudumele, kanye namanzi ezemidlalo kuyatholakala lapha.
Okuhlangenwe nakho kakhulu ekuqinisekiseni ukuthokoza bakithi kwesokunxele kanye nabasebenzi ehhotela "Imperial De luxe". Ngakho, naphezu kweqiniso lokuthi iningi ubhoko eziyinkimbinkimbi ehhotela akazange ukukhuluma noma ukuqonda ngesiRashiya, babengaphuthi inobungane ngokufanele maqondana lodgers futhi wazama ukwenza konke okusemandleni abo ukuze ajabulise zona.
Futhi Ngithande izivakashi kanye spa wendawo. Ngokusho kwabo, lapha eniyenzayo massage omkhulu, eliphathisa nezinye ukwelashwa ubuhle.
Paphiessa Ihhotela futhi Ihhotela Apts 3 * (Cyprus, ePhafu): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Alps: ukuphi lezi zintaba ezinhle?